Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » | » Umsongelo weMpilo oMkhulu kune-COVID-19 evelayo?
| • Iindaba zeMpilo
Ngokufa okungaphezulu kwezigidi ezi-5 kwihlabathi liphela, i-COVID-19 ibeke umthwalo obalulekileyo kuluntu nakwiinkqubo zokhathalelo lwempilo kwihlabathi liphela.
Njengoko siqhubeka nokujongana neempembelelo ze-COVID-19, kukho isoyikiso esikhulu ngakumbi sempilo yoluntu ekufuneka sijongwe, i-AMR. Ukubaluleka kwendima yococeko ekwaphuleni ityathanga losulelo kubonakalisiwe ngexesha lobhubhani we-COVID-19, nangona kunjalo, iingcali ze-GHC zoyika ukuba sibona ukutyhafa kwezempilo njengoko sitshintshela kwihlabathi le-post-COVID, sisoyisa isoyikiso se-AMR.
Kwinyanga ephelileyo i-WHO isungule ingxelo yayo ngobume bococeko lwezandla zehlabathi, ichaza ukubaluleka kococeko lwezandla ekuthinteleni ukosuleleka kunye nokunciphisa umthwalo we-AMR ngokwandisa ubomi bee-antimicrobials (umz. antibiotics). I-GHC iyakwamkela oku kugxilwa kokunyuka kokucoceka kwezandla kwaye ixhasa i-WAAW yalo nyaka ngokugxininisa imisebenzi yayo ekunciphiseni imfuno ye-antibiotics ngokukhuthaza ukuphuculwa kwezandla zococeko ukukhusela ukusasazeka kwezifo.
Isithethi seGHC, uSabiha Essack, uNjingalwazi ophuma kwiSikolo seSayensi soPhando kwiDyunivesithi yaKwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika uthi, “Ucoceko olunoxanduva olufana nokuhlamba izandla lungenelelo olusebenzayo lokuthintela usulelo, lunceda ekupheliseni imfuno yamayeza okulwa neentsholongwane (umz. antibiotics). Iindlela zokuziphatha ezinjengokuhlamba izandla zinamandla okunciphisa usulelo lwezifo, njengoko ziqhelekile kwi-COVID-19 kwaye kufuneka zikhuthazwe emva kobhubhane ”.
Ukusetyenziswa ngokungeyomfuneko kwamayeza okubulala iintsholongwane kuye kwakhawulezisa ukuvela nokusasazeka kweebhaktheriya ezixhathisayo. Usulelo oluxhaphakileyo olunganyangekiyo ngenxa yebhaktiriya enganyangekiyo ngamagciwane lubalelwa kukufa okungaphezulu kwama-700 000 ngonyaka kwihlabathi liphela kwaye kuqikelelwa ukuba luyayanyaniswa nokusweleka kwabantu abazizigidi ezili-10 ngonyaka ngo-2050. ukuya kuthi ga kwi-50% kwaye inikezela ngesikhokelo sokunciphisa ukumisela amayeza okubulala iintsholongwane, ukunciphisa amathuba okuba kwakheka iibhaktheriya ezixhathisa amayeza okubulala iintsholongwane.
Ngesehlo sokuqhambuka kwezifo ezosulelayo kunokwenzeka kwiminyaka ukuya kuthi ga kwi-2030, kufuneka samkele isimilo esihlala sicocekile ukuze sizikhusele thina kunye nabo sibathandayo ngokuchasene nesoyikiso sezifo ezosulelayo ezisakhulayo, ukunciphisa umthwalo we-AMR, kunye ne-antimicrobial-proof-proof, njenge antibiotics, kwiminyaka ezayo.